Izindaba - i-Evonik: I-Acqusition kuchwepheshe we-Chinese 3D wokuphrinta i-UnionTech - Izicelo ezintsha ze-performance photopolymer resins ekugxileni
I-Evonik: Ukwamukelwa kochwepheshe be-Chinese 3D bokuphrinta i-UnionTech - Izinhlelo ezintsha zokusebenza kwe-resin photopolymer resins
U-Evonik uthole isiteki esincane enkampanini yaseChina i-UnionTech ngeyunithi yeVenture Capital. Inkampani ezinze eShanghai iyasebenza emkhakheni wokuphrinta kwe-stereolithography 3D. Lobu buchwepheshe bokukhiqiza obenziwayo benza kube nokwenzeka, ukukhiqiza izingxenye zepolymer ezinembe kakhulu nezinemininingwane eminingi. UBernhard Mohr, inhloko yophiko lwe-Venture Capital: “Silindele intuthuko enkulu kwezobuchwepheshe emkhakheni we-stereolithography. U-Evonik ulungiselela ukwethulwa kwezinto ezilungele ukusetshenziswa zale nqubo. Ukutshala kwethu imali ngakho-ke akuhlosile kuphela ekubuyiseleni imali okunenzuzo, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuqonda okusha ekusetshenzisweni kwale nqubo. ” U-Evonik ulindele ukufinyelela emakethe okusheshayo kwemikhiqizo emisha ye-photopolymer, ikakhulukazi emakethe yaseChina ekhula ngokushesha okukhulu, u-Mohr uqhubeke.
Kwinqubo ye-stereolithography ingxenye idonswa kubhavu we-resin elulaza uketshezi. I-Laser noma imithombo yokukhanya ekhanyayo yelapha ungqimba lwe-photopolymer ngongqimba, okuholele kumkhiqizo o-ntathu. Ngale ndlela, ukukhiqizwa kwezinto zokusebenza eziyinkimbinkimbi kungenzeka, ezinesakhiwo esibushelelezi futhi esiqinile kunezinye izinqubo ze-3D. Izimakethe ezijwayelekile zifaka abenzi bezimoto nezindiza kanye nezingxenye zezimboni noma izicathulo ezikhethekile.
UThomas Grosse-Puppendahl, inhloko ye-Additive Manufacturing Innovation Growth Field e-Evonik, ubona utshalomali njengokwengeza okuhle kakhulu kuphothifoliyo ekhona. U-Evonik ulungiselela ukwethulwa kwesethi yokwakhiwa okusha emakethe njengesiqalo somugqa womkhiqizo omusha we-INFINAM® photopolymers. “Ngokwethulwa okuthe xaxa kwemikhiqizo emisha kanye nokubamba iqhaza kwamanje ku-UnionTech, sandisa imisebenzi yethu njengomlingani onokwethenjelwa embonini ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izinto zokusebenza eziphezulu zokuphrinta kwe-3D ukuqinisa imisebenzi yethu yebhizinisi ngokuhambisana nokubalulekile ubuchwepheshe be-photopolymer, ”kusho uThomas Grosse-Puppendahl. Ngaphezu kwephothifoliyo ye-polymer yezinqubo ezenzelwe i-powder kanye nemicu ye-biomaterial yobuchwepheshe bezokwelapha, u-Evonik uzonikezela ngezinsimbi eziningi ezilungele ukusetshenziswa zobuchwepheshe obususelwa ku-photopolymer ukuze kuqhutshekwe kuhlukaniswe indawo ebonakalayo yemakethe yonke yokuphrinta ye-3D , ngokusho kukaGrosse-Puppendahl.
U-Evonik utshale imali ezinkampanini eziningi emkhakheni wezokukhiqiza okungeziwe ukuxhasa ukuthuthukiswa kwale mboni. Ukutshalwa kwezimali kwe-UnionTech kugcwalisa ngokuphelele iphothifoliyo ekhona ka-Evonik yemisebenzi yokuphrinta ye-3D futhi kungukutshalwa kwezimali kwe-3D kwesibili eChina.
I-UnionTech ibhekwa njengomholi wemakethe e-Asia yamaphrinta ezimboni amakhulu asayizi omkhulu. Le nkampani iqala futhi ikhiqize amaphrinta, inikeze izinto zokuphrinta ngezinkampani ezingaphansi kwayo futhi inikeze ukukhiqizwa okungeziwe njengomhlinzeki wesevisi. Lokhu kunikeza inkampani ukubuka konke okuphelele kwezicelo ze-3D. I-UnionTech yasungulwa ngonyaka ka-2000 futhi inabasebenzi ababalelwa ku-190. UJinsong Ma, iMenenja Jikelele ye-UnionTech, naye wamukela ukubamba iqhaza kwenkampani ekhethekile yamakhemikhali ngokombono wamasu: “U-Evonik ukhiqiza izinto zokwenziwa kwazo zonke izinqubo ezivamile zokuphrinta ze-3D. Lokhu kwenza inkampani ibe ngumlingani ofanele ukuqhubeka nokukhula nathi. Lokhu kusinikeza ukufinyelela ngqo ezintweni esizidingayo kumakhasimende ethu. ”
I-UnionTech iphethwe ngabatshali bezimali baseChina abaningi kanye nabaphathi benkampani. Kwavunyelwana ngokuthi kungadalulwa inani lotshalo-mali.
Izindaba zeWeitere im plasticker
Isikhathi Iposi: Dec-25-2020